12 Meelo Cajiib Ah Oo Lagu Booqdo Ruushka | Save A tareenka
Home > Tareen safarka Ruushka > 12 Meelo Cajiib Ah Oo Lagu Booqdo Ruushka
Guud ahaan Siberian taiga, harada ugu qadiimsan Baikal, duurjoogta Kamchatka ilaa Moscow, kuwan 12 meelaha cajiibka ah ee lagu booqdo Ruushka ayaa neefta kaa qaadi doonta. Kaliya dooro habka safarkaaga, xir gasho galoofis diiran ama koodh roob qabow ah cimilada khayaanada, oo na raac Ruushka.
1. Buuraha Altai
Inta udhaxeysa Ruushka, Mongolia, Shiinaha, iyo gobolka Kazakhstan Altai ayaa hoy u ah 700 harooyinka, kaymaha, iyo kan ugu sarreeya Siberia ee Mt Belushka, at 4506 m. Altai waa dad yar, markaa waxaad ka heli doontaa iyada oo aan ilbaxnimada casriga ahi taaban, oo kaliya dabeecada duurjoogta ah iyo duurjoogta ayaa ku salaami doonta.
Intaa waxaa dheer, hadaad tahay safar socdaal ah, ka dib safar mid kasta oo ka mid ah 1499 glaciers ee Altai ayaa kaa yaabi doona. Waxaa intaa dheer, maraakiibta ugu weyn ee Katun iyo Biya webiyada ayaa ah waaya aragnimo taariikhi ah. Dhanka kale, Safari duurjoogta waxay noqon kartaa xulasho nasasho badan. Waxaad heli kartaa fursad naadir ah oo aad kula kulanto shabeelka barafka, ibex, lynx, iyo in ka badan 300 noocyada shimbiraha. shaki kuma jiro, Altai waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican meelaha duurjoogta loo tago Yurub iyo meel la yaab leh oo lagu booqdo Ruushka.
Kazan waa samada dhismaha ee Jamhuuriyadda Tatarstan, galbeedka Ruushka. Bartamaha dunida Tataar waxay ku taal daanta Volga, iyo webiyada Kazanka, oo loo tixgeliyey magaalada shanaad ee ugu weyn Ruushka.
Sida kor ku xusan, qaab dhismeedka goobaha ugu muhiimsan Kazan ayaa indhahaaga ku qabanaya midabbada cad iyo buluugga ah iyo naqshadeynta. Tusaale ahaan, Kazan Kremlin, goob dhaxal adduun, Masjidka Kul Shariif, Kaniisadda Epiphany, waa dhowr meelood oo aad booqan karto si aad waxbadan uga barato dhaqanka Tataarka.
3. Meelo Cajiib Ah Oo Lagu Booqdo Ruushka: Lake Baikal
Harada ugu da'da weyn taariikhda adduunka, Harada Baikal ayaa samaysmay 25 milyan sano ka hor. Dhul baraf iyo baaxad leh waxay ka dhigeysaa harada Baikal soo jiidasho xilliga qaboobaha ee Siberia, iyo xagaaga, waxaad ku boodi kartaa biyaha ugu cadcad Yurub, ama sahamiyaan duurjoogta adduunka ugu dhif ah.
Gawaarida, ka bogo raadadka Baikal ee lugta ah, ama aad ku leedahay hilib dubis xeebta harada ugu yaabka badan Ruushka, waxaad yeelan doontaa tacabur maskax-afuuf ah. Geedaha geedaha ku wareegsan, Taiga iyo cidlada waa a safarka tareenka ka socda magaalada ugu dhow Irkutsk, meel kale oo soo jiidasho leh oo lagu booqdo Ruushka. Si aad uga wada dhigto wax walba, waxaad ka bilaabi kartaa dalxiiskaaga 'Baikal' Shiinaha ama Ruushka, tareenka Trans-Siberian, xagaaga ama jiilaalka.
Magaalada Tsars iyo daaraha waaweyn, Saint Petersburg waxay u waxyooday gabayaaga iyo qorayaasha. Hadaadan dhigan Saint Petersburg, runti maadan arkin Ruushka, maxaa yeelay magaaladani waa mid ka mid ah astaamaha ugu caansan uguna caansan Ruushka.
Hermitage-ka, Qasriga Catherine, Qasrigii Jiilaalka, iyo jardiinooyinka Peterhof, kaliya waa kuwo neefsanaya. Tallaabo kasta oo aad qaaddo waxay kuu soo jiidan doontaa sheeko xariiro Ruush ah oo way ku sixri doontaa. Taariikhda iyo qaab dhismeedka Saint-Petersburg waxay ka dhigayaan meel loo baahan yahay in lagu booqdo Ruushka oo dabcan mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya 12 meelaha ugu cajiibka badan Ruushka.
Duurjoog, ballaaran, qurux badan, oo layaab leh, Kamchatka wuxuu ku sugayaa ku dhowaad dhamaadka adduunka. Jasiiradda Kamchatka waxay ku taal bariga fog ee Ruushka, guriga in ku dhow 300 volcanos, badankood way firfircoon yihiin, iyo aragtiyaha ugu maskaxda-badan ee badweynta Baasifigga iyo saxaraha Ruushka. Dad aad u yar ayaa ka yaqaana waxyaabaha cajiibka ah ee Kamchatka, markaa Kamchatka waa meesha ugu cajaa'ibka badan uguna aan caadiga ahayn ee lagu booqdo Ruushka.
Waxaad arki doontaa inaysan sahlaneyn in la gaaro waxyaabaha yaabka leh ee Kamchatka, meesha fog awgeed. Si kastaba ha ahaatee, markaad sameyso, waxaa lagaa yaabi doonaa dabeecadda aasaasiga ah, yaabab dabiici ah: ah ilaha biyaha oo kulul, webiyaasha, duurjoogta, iyo dabcan volcanos. A Safarka volcano waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu daran uguna xiisaha badan ee lagu sameeyo Kamchatka. Tusaale ahaan, Klyuchevskaya Sopka waa meesha ugu sareysa uguna firfircoon, Meel loogu talagalay safarro badan oo Kamchatka ah.
6. Meelo Cajiib Ah Oo Lagu Booqdo Ruushka: Sochi
Xeebaha Badda Madoow, ay ku wareegsan yihiin buuro cagaaran iyo goobo dalxiis, Sochi waa meesha ugu dambeysa ee fasaxa xagaaga lagu tago Ruushka. Sochi waa mid caan ah oo magaaladu soo jiidato 4 milyan qof sanadkii, loogu talagalay fasaxa xagaaga badda agteeda.
Qorraxda ka sakow, Sochi Arboretum, ama Talyaani yar, waa mid ku habboon aragtida dusha sare ee Badda Madow iyo Sochi, oo ku warwareega beeraha dhexdooda iyagoo ku faraxsan boor daaqada.
Si aad u soo gabagabeyn, ma jirto meel ka wanaagsan oo lagu nasto oo lagu nasto, qaabka Ruushka, Ruushka marka loo eego Sochi. Sidaa darteed, Maaha wax lala yaabo inaad u safri karto Sochi magaalada Mosko iyo meel kasta oo Russia ah, iyo sidoo kale Bartamaha Aasiya iyo Bariga Yurub, tareen.
Veliky Novgorod waxay ku leedahay meel sharaf meelaheena ah 12 meelaha ugu layaabka badan ee lagu booqdo Ruushka. Waxaad dhihi kartaa Novogrod-ka weyn waa halkii uu Ruushku ka noqday wadankii weynaa ee uu maanta yahay. Ku noqo 9-aad qarnigii, Veliky Novogrod wuxuu ahaa meeshii Amiir Rurik, in 862 ku dhawaaqay dawladnimada casriga ah ee Ruushka wuxuuna Novogrod ka dhigay xarunta ganacsiga, dimuqraadiyadda, iyo akhris-qorista udhaxeysa Ruushka iyo Balkan.
Sidaas, haddii aad ku jirto taariikhda Ruushka, Veliky Novogrod waa inuu ku jiraa liiska baaldigaaga. Qalcadda Novogrod Kremlin, Cathedral St.. Sophia waa uun 2 oo ka mid ah goobaha ay tahay in laga arko Veliky Novogrod oo kaa yaabin doona. U taagan 800 sano, kaliya ka fikir sheekooyinka iyo dhacdooyinka halkan ka dhacay.
8. Meelo Cajiib Ah Oo Lagu Booqdo Ruushka: Jasiiradda Olkhon
Harada Baikal aad ayey u weyntahay, inay ahayd inaan ku darno meel kale oo la yaab leh oo ay tahay inuu booqdo marka uu joogo Ruushka. Jasiiradda Olkhon waa jasiiradda ugu weyn harada Baikal, cabir ahaan la mid ah Magaalada New York. Jasiiraddu waxay hoy u tahay fikirka keymaha, dhul dhagax ah, oo kaliya 150000 dadka deegaanka, si ka duwan Magaalada New York.
Si kastaba ha ahaatee, Jasiiradda Olkhon waa goob caan ku ah dadka safarka ah ee ku teedsan harada Baikal. Tani waxay ka dhigan tahay in xagaaga aad u imaan karto inaad ku dabaalato biyaha harada nadiifka ah ee nadiifka ah isla markaana aad ku quusto harada ugu moolka dheer adduunka.. Xilliga jiilaalka, dhanka kale, waad u imaan kartaa inaad ku qanciso harada ugu da'da weyn adduunka, dharka jiilaalka, barafoobay oo qurux badan oo cad.
Jasiiraddu waa doon ka fog Sakhuyurta iyo dadka Buryat waxaa la rumeysan yahay inay tahay 1 ee shanta tiir ee tamarta Shamanic. Dhab ahaan, waxaad ka heli kartaa dhagxaanta shaman bartamaha jasiiradda.
Haddii aad ku jirto safarkaaga Trans-Siberian, markaa waxaad u badan tahay inaad ku joogsan doontid Irkutsk, caasimada aan rasmiga ahayn ee Bariga Siberia. 19Kaniisadihii Ruushka qarnigii, guryo midab bunni iyo buluug leh leh, Sigaariyaan Taiga, Irkutsk waa magaalo taariikhi ah oo qurux badan.
Waxaa intaa dheer, Irkutsk waxay mar ahayd meel laga musaafuriyo rag badan oo Ruush ah oo caan ah iyo waxgarad Siberia, hadday xukumadda talada haysaa go'aansato inay xukunka ka hor yimaadaan. Sidaas, Irkutsk iyo Siberia taiga waxay soo bandhigaan shaqooyin badan oo Ruush ah oo gabayo iyo suugaan ah. Si kastaba ha ahaatee, maanta Irkutsk waa magaalo qurux badan: block 13 guryaha alwaaxda qarnigii 18-aad, Kaniisadda Badbaadiyaha, iyo Barxadda Bronshteyn waa dhowr ka mid ah meelaha ay tahay inaad booqato.
10. Meelo Cajiib Ah Oo Lagu Booqdo Ruushka: Keydka Dabiiciga ee Stolby
Dhinacyada wabiga Yenisei, Keydka dabeecadda Stolby wuxuu ku yaal koonfurta magaalada Krasnoyarsk. Kaydku kuma dhici doono qurux ka top 5 keydka dabiiciga ugu quruxda badan Yurub. Safar dheer kadib tareenka Trans-Siberia ee kuyaala Russia, waxaad ogaan doontaa in ku warwareega kaydka uu kor u qaado ruuxaaga oo hurdada ka toosiya jirka iyo nafta hurda.
Stolby ayaa leh 5 wadiiqooyinka ugu waaweyn ee midabbada leh, markaa ku waayi meysid jidadka badan ee yar yar. Mar alla markii aad gaadho meel fog oo hawdka ah, waxaad ogaan doontaa asalka magaca keydka. Waxaa jira 100 stolby - tiirar dhagax ah, kooxo waaweyn oo qurux badan oo dhaadheer oo geedaha dhexdooda ah.
Booqashada jardiinadan dabiiciga ah ee quruxda badani waxay ku saabsan tahay ku raaxeysiga sida ugu fiican ee dabiiciga ah ee hooyada. Ma jiraan wax la mid ah urta iyo aragtida kaymaha Ruushka, xagaaga ama jiilaalka. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad qorsheyneyso safar jiilaal ah xusuusin deg deg ah inaad xirto lakabyo badan, iyadoo Siberia aad u qabow iyo baraf.
Arbat midab leh, Kremlin iyo Fagaaraha Cas, St. Basil’s Cathedral, iyo wabiga Moskva, muuqaalka kaarka kasta oo boosta ku yaal, sawir, iyo gabal ku saabsan Moosko. Si kastaba ha ahaatee, kaliya ilaa aad cagaha dhigto goobahan cajiibka ah, inaad runti qadarin weynidooda iyo quruxdooda. Ma jiraan wax su'aal ah oo ku saabsan soo jiidashada quruxda badan ee Moscow. Sidaas, ma ahan wax lala yaabo caasimaddu inay ka mid tahay 12 meelaha ugu layaabka badan ee lagu booqdo Ruushka.
Halka Moosko ay neefsaneyso, magaalada dhulka hoostiisa ku taal ee saldhigyada metro ayaa sidoo kale aad u qurux badan. Magaalo socod lug ah dhulka hoostiisa Moscow waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee lagu sameeyo Moscow. halkan, waxaad heli doontaa tanno macluumaad ah oo ku saabsan farshaxanka, design, iyo taariikhda xarun kasta, sidoo kale magaalada, ka yimid dadka deegaanka.
12. Meelo Cajiib Ah Oo Lagu Booqdo Ruushka: Jasiiradda Kizhi
Kaniisadaha alwaaxda ah, munaarad saacad laba-geesood leh oo gebi ahaanba alwaax ah, waxay ka kooban tahay Kizhi Pogost gaar ah. Dhismahan aan caadiga ahayn ee dhismayaasha alwaaxa waxaa sameeyay nijaarro, mid ka mid ah jasiiradaha ku yaal Harada Onega. Waad la yaabi doontaa inaad ogaato in nuucaan noocan ahi caan ku ahaa waqtiyadii hore. Meelahan alwaaxa ah waxay ahaayeen goobo caan ah oo kaniisadeed qarnigii 16aad, iyo laga yaabee goor hore.
In kasta oo kaniisadaha aysan ahayn wax naadir ku ah Ruushka, kaniisadaha alwaax waa. Jasiiradda Kizhi waa tusaale cajaa’ib leh farsamayaqaannada Ruushka. Jasiiradda Kizhi waa a UNESCO site dhaxal ahaan dunida, iyo mid ka mid ah layaabka adduunka, sida dhismaha oo dhan, ku habboon yahay si heer sare ah muuqaalka dabiiciga ah.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku farxi doonaa inaan kaa caawinno qorsheynta safar lama ilaawaan ah kuwan 12 meelaha layaabka leh ee Russia tareen.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada " 12 Meelo Cajiib Ah Oo Lagu Booqdo Ruushka ”boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Famazing-places-visit-russia%2F - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#Ruushka Ruushka Amazing Church HaradaBaikalrussia Moscow Meelaha ugu quruxda badan ee Russia SaintPetersburg Siberia TranSiberiantrain SafarkaRussia Booqasho Russia